ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိချင်စိတ် ၄ ခု ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
El လက်ရှိကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု ၎င်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကားကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းဖြစ်စေ၊ ညစ်ညမ်းစေခြင်းဖြစ်စေဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိရောဓိအရကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာစေသည်။
နောက်ငါမင်းကိုပြောမယ် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့်ပတ်သက်။ သိချင်စိတ်4အခြေအနေကိုဘယ်လောက်အထိအလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ဖို့ပါ။
အရည်ပျော်ခြင်းသည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အန္တရာယ်အရှိဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်ပျော်ရေအားလုံးသည်ပင်လယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီး၎င်း၏အဆင့်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်သာမက၊ ဤဂေဟစနစ်တွင်နေထိုင်သောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဘဝသည်အလွန်ခက်ခဲစေသည်ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံများကဲ့သို့။
ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးမြို့ကြီး ၁၅ မြို့အနက် ၁၃ မြို့သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မီတာအနည်းငယ် (နှင့်စင်တီမီတာ) မျှသာရှိသည်။ အလက်ဇန္ဒြီးယား၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ နယူးယောက်၊ အဓိကရေကြီးမှုအန္တရာယ်, NOAA အရသိရသည်နှစ်ခုမီတာအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
ဒီတော့ဝေး, 125 အာတိတ်ရေကန်များပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်။ ပြီးတော့သူတို့အောက်မှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေသောအမြဲတမ်းရေခဲသောရေခဲသည်အရည်ပျော်နေပြီးရေကန်များကမြေကြီးထဲကိုစုပ်ယူသည်။ ဒီရေထဲမှာနေတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေဟာမျိုးသုဉ်းမယ့်အန္တရာယ်ရှိတယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ရေကန်များကဲ့သို့သောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများပိုမိုစပြုလာသည် ရေညှိ။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်နေရောင်ခြည်မရရှိခြင်းကြောင့်နက်နဲသည့်အပင်များပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုစားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေဟာသူတို့ရှင်သန်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နဲ့အခြားအရာတွေကိုစားဖို့လေ့ကျင့်ကြရပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောပြaနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လျှင်၎င်း၏အကျိုးဆက်များသည်အလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့်ပတ်သက်။ သိချင်စိတ် 4
Juanjo Castro Rios ဟုသူကပြောသည်
ဒါကိုဘယ်သူရေးခဲ့တာလဲ သူကမိုးလေ ၀ သပညာရှင်မဟုတ်ဘူး။ ရာသီဥတုဗေဒပညာရှင်မဟုတ်ဘူး။ သူသည်သူ့ဘ ၀ တွင်ရူပဗေဒပညာကိုလေ့လာလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံဌာနမှလည်းအောင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှသိစရာမလိုတဲ့သူဟာသူထင်မြင်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်မအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သုတေသီများသည်အဖြစ်မှန်ကိုသက်သေပြရန်မဖြစ်နိုင်သေးသည့်အရာများနှင့်မပြင်ဆင်ဘဲနှင့်အဖြစ်မှန်ကိုပြောရမည်။ များစွာသောသူတို့သည်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးထို့ကြောင့်သူတို့၏ထောက်ပံ့ငွေများကိုထိန်းသိမ်းထားသောထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက်များကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစိတ်ပျက်ဖွယ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်သန်း ၁၅၀ ယူခဲ့သောအဲန်ဂျီအိုများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် Meteorologiaenlared? သူတို့မသိသောနေရာများသို့မသွားသင့်ပါ၊ အနည်းဆုံးဆောင်းပါးကိုမည်သူလက်မှတ်ထိုးသည်ကိုပြောသင့်သည်၊ သူတို့၏အရင်းအမြစ်များသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးမှ၎င်းကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
Juanjo Castro Ríosကိုပြန်ပြောပါ
သင်မှန်တယ်၊ ရင်းမြစ်တွေပျောက်နေတယ်။ သူတို့ကိုငါတင်လိုက်သည်။